Danjire Caalim “ Safarka Ra’isul Wasaare Kheyre Ee Itoobiya Maxaa Ka Fahansantahay?” – Somali Top News
May 27, 2018 Somali Top News	0 Comments
(STN-MUQDISHO):- Ra’isul wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Ku sugan Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya iyagoo aan helin maamuus dibloomaasiyadeed .
Safarka Ra’isul wasaaraha ayaa ah mid deg deg ah, mana jirin qorshe Taliska Itoobiya ugu diyaar garowday ineey la qaadato wafdiu ka socda dowladda Soomaaliya.
Madaxda Waqtiga hogaamisa wadanka itoobiya waxeey aad ugu mashquulsan yihiin Booqashada Madaxweynaha Ruwanda Mudane Paul Kagame oo marti u ah madaxda Iyo Shacaka dalka Itoobiya.
Page-ka wasaaradda Arimaha Dibadda Itoobiya waxaa lagu soo daabacay kaliya in Itoobiya uu soo garay madaxwynaha Ruwanda waxaana labada dal ay ka wada hadlayaan horumarka midowga Africa, kobcinta ganacsiga qaaradda iyo waliba xeriirka labada dal oo dhinacyo badan leh.
Waxaa Falanqeynteyda ku dul istaagayaa shanta caqabadood ee horyaala waqtigan safarka Ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre uu ku tagay dalka Itoobiya.
1: Dowladda Itoobiya kuma qanacsano go’aanka dhexdhaxaadnimada Soomaaliya ay ka qadatay dallaka Khalej-ka waxaana ay aaminsantahay in Soomaaliya iyo Qatar ay yihiin xulufo dhaw, sdoo kale itoobiya waxeey ka soo horjeedaa habka dowladda uu Hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo ula falgasho maamul goboleedyada taa oo micnaheedu yahay in Itoobiya ay taageersantahay Nidaamka Federalism-ka waxaana Dowladda dhexe ee Soomaaliya ka aaminsantahay ineey ka soo horjeedo Federalka.
2: Dowladda Itoobiya waxa ay xeriir dhaw la leedahay Sacuudiga iyo Imaaradka Carabta ,waxaana Todobaadkan warbaahinta Carbeed ugu magac dartay Todobadkii Ra’isul wasaaraha Iyo Itoobiya iyo Africa, waxaana Abyi Axmed uu booqan doonaa Labada dal ee Imaaradka Iyo Sacuudiga si ay u maalgashadaan Itoobiya.
3: Wasiirka Arimaha Dibadda oo ka gaabsaday wada shaqeynta xukuumadda uu Hogaamiyo Ra’isul wasaare Xasan Cali Iyo Dowladda Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo kadib cadaadis xoog leh oo Villa Soomaaliya ay saartay wasiirka taana waxaa kuu cadeyneysa Ra’isul wasaaraha ma raacin Madaxweynaha safarkiisii Qatar Iyo Safarka Ra’isul wasaare Kheyre ee dalka Iyoobiya.
4: 26-june waxaa Magaalada Brussels ee dalka Belguim lagu qaban doonaa International Farum oo ay soo qaban qaabisay Midowga Yurub waxaana looga hadli doonaa arimaha Soomaaliya, maamul goboleedyada dalka, Dhisidda Ciidanka Iyo Nidaamka siyaasadeed ee dalka, wuxuuna shirkaasi u muuqdaa mid dowladda ku fashilmi doonto maadama maamul Goboleedyada uu khilaaf kala dhaxeeyo, dagaalka ka socda Tukaeaq oo aan la maareyn, iyo wadahadlkii Somaliland Iyo Soomaaliya oo lumay.
5: Itoobiya marnaba ma muujin biseyl siyaasadeed oo ay u qabto Madaxda Soomaaliyeed maxaa yeelay waxaa diiradda la saaray Booqashada Madaxweynaha Ruwnada Paul Kigami, mana lagu daabicin page-ka wasaaradda arimaha dibadda kulanka dhexmaray labada ra’isul wasaare.
Waxaa falanqeynteyda ku soo gabagabeynayaa qoraalka falanqeynta ah waa fikir ani ii gaar ah sidaan ani u arko safarka Ra’isul wasaaraha Xasan Cali Kheyre.
← Stop Companies From Discouraging Saudi Job Applicants
Golaha Aqalka Sare Oo Lacag Ugu Deeqay Dadka Fataahada Iyo Duufaanada Saameeyeen →
Maxaa laga filan karaa Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay oo kulan ka leh Soomaaliya?
Itoobiya marna codsi u qoro marna cambaaree qoraal ku socda madaxweyne Farmaajo